Taunggyi - The Cherry Land: Hot Air Balloon Festival
The most spectacular event of the year is the Hot Air Balloon Festival held every November in Taunggyi commonly called the Taunggyi Tazaungdaing Festival. Thousands of local pilgrims and international tourists choose to visit Taunggyi, especially to watch scores of giant paper animals being inflated and floated off into the sky.
The competitions run during the day and at night when the sky is colorfully illuminated with hot air balloons. This Festival also included the celebration of the Tazaungdaing with Kahtein (offering of monk roves). Hot air balloons in the shape of elephant, ox, horse, water buffalo, bird pig, fish, owl and parrot are sent up into the sky.
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 8:32:00 PM
Wednesday, October 29, 2008 2:08:00 AM
Saturday, May 29, 2010 6:23:00 AM
Great post! I want to seeafollow up on this topic..
Monday, September 27, 2010 8:48:00 PM
Thursday, November 12, 2015 9:07:00 AM
Friday, April 08, 2016 8:16:00 AM
Friday, May 27, 2016 4:57:00 PM
Monday, July 25, 2016 3:47:00 PM
Sunday, January 22, 2017 2:18:00 PM
Friday, April 13, 2018 8:28:00 AM
Thursday, July 26, 2018 12:42:00 PM
Monday, September 03, 2018 9:20:00 AM
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ဓာတ်ပုံများ (၅)
Taunggyi IT vs Cities IT
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ဓာတ်ပုံများ (၄)
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ဓာတ်ပုံများ (၃)
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ဓာတ်ပုံများ (၂)
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ဓာတ်ပုံများ (၁)
ပြိုင်ပွဲဆုရ မေလွင်ဦးရဲ့ ဓာတ်ပုံများ
ထာဝရလှသော တန်ဆောင်တိုင် (အမျိုးသမီး) MTV
ထာဝရလှသော တန်ဆောင်တိုင် (အမျိုးသား) MTV
အနှိုင်းမဲ့ ဝေဟင် MTV
တန်ဆောင်တိုင် WebCast ကျေးဇူးတင်လွှာ
၂၃ ရက်နေ့ ညဓါတ်ပုံများ အပိုင်း(၁)
၂၂ ရက်နေ့ ညဓါတ်ပုံများ အပိုင်း(၅)
၂၂ ရက်နေ့ ညဓါတ်ပုံများ အပိုင်း(၄)
၂၂ ရက်နေ့ ညဓါတ်ပုံများ အပိုင်း(၃)
၂၂ ရက်နေ့ ညဓါတ်ပုံများ အပိုင်း(၂)
၆၀ကြိမ်မြောက် တောင်ကြီးမြို့ မဟာဘုံကထိန်
တောင်ကြီးမြို့နဲ့ Studio 35
၂၀ ရက်နေ့ ညဓါတ်ပုံများ (၅)
၂၀ ရက်နေ့ ညဓါတ်ပုံများ (၄)
၂၀ ရက်နေ့ ညဓါတ်ပုံများ (၃)
၂၀ ရက်နေ့ ညဓါတ်ပုံများ (၂)
၂၀ ရက်နေ့ ညဓါတ်ပုံများ (၁)
၁၉ ရက်နေ့ က မီးပုံးပျံတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပါ
ပြိုင်ပွဲဝင် ပထမနေ့ နေ့လွှတ်ဓါတ်ပုံ
2nd ICT Exhibition Shan State (3rd Final Day)
Net Game ပြိုင်ပွဲ Semi & Final
တောင်ကြီမြို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအ...
သူတို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီ ၄
2nd ICT Exhibition 2007 (Shan State)
IT Caravan 2007
2nd ICT Exhibition 2007 (Shan State) ဖွင့်ပွဲ
အတိတ်က ကျောင်းသားအားကစား ပွဲတော်
၁၃၆၉ခုနှစ် တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အစမ်းလေ့...
သူတို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီ (၃)
တောင်ကြီးမြို့ ရဲ့  အထင်ကရပွဲတော် (New Version)
နေ့အလိုက် လွှတ်တင်မဲ့ မီးပုံးပျံ စာရင်းတွေပါ
နှစ် အလိုက် မီးပုံးပျံစာရင်း
ရွှေအင်းတိန်ဘုရားများသို့ တစ်ခေါက် ၃
E-Cards for Tazaungtaing Festival
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် Webcast လွှင့်မည်
တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အထင်ကရ ပွဲတော် သီချင်း
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် Live & Webcast
၂၀၀၇ တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် ပြင်ဆင်မှု မျာ...
တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အထင်ကရပွဲတော် သီချင်း
ရွှေအင်းတိန် ဘုရားများသို့ တစ်ခေါက် (၂)
ရွှေအင်းတိန် ဘုရားများသို့ တစ်ခေါက်
Computer Net Game ပြိုင်ပွဲ
တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် Vs ပြင်ဦးလွင် တန်ဆောင်တို...